Nepali Rajneeti | मन्त्रालय फुटाएर पृथ्वीसुब्बाले बनाए दीपक मनाङेलाई मन्त्री
मन्त्रालय फुटाएर पृथ्वीसुब्बाले बनाए दीपक मनाङेलाई मन्त्री
बैसाख १७, २०७८ शुक्रबार १९० पटक हेरिएको
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
यसअघि प्रदेश सरकारले युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् गर्दै आएको थियो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन छिन्।
नवनियुक्त मन्त्री मनाङेलाई केहीबेरमा सपथ खुवाउने कार्यक्रम छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको ८ पुगेको छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद थियो।
आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आइरहेका बेला मुख्यमन्त्री गुरूङले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन्। बुधबार सांसद गुरूङ प्रदेश सभा बैठकमा पनि सहभागी भएका थिएनन्।
सभामुखले अनिश्चितकालका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका थिए।
मनाङे आपराधिक पृष्ठभूमिका हुन्। उनी सांसद चुनिनुभन्दा अघि डिल्लीबजार कारागारमा थिए।
गुण्डा नाइके चक्रे मिलनको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
होटल हायातमा ग्याङ वार हुँदा मिलनको हात मनाङे समूहले छिनालिदिएको थियो। सो घटनामा मनाङे प्रतिवादी थिए।
प्रचण्डको प्रतिवेदन बिरूद्द माअोवादी नेताको नै फरक मत ! के गर्लान प्रचण्ड ?
रन्जु दर्शना एमाले प्रवेश गर्दै ?